Fihariana-Symabio: tosika ho an’ny fambolena biolojika | NewsMada
Ao anatin’ny velirano napetraky ny filoha Rajoelina ny fampandrosoana ny seha-piharian’ny mpandraharaha ka mañana andraikitra amin’izany ny fandaharanasa Fihariana. Natao sonia ny 23 septambra teo, ny fifanarahana eo amin’ny fandaharanasa Fihariana sy ny vondron’ny orinasa mamokatra biolojika Symabio. Mifantoka amin’ny fambolena sy fanodinana vokatra biolojika ny Symabio.
Nilaza ny sekretera mpanatanteraka (SE) ny Fihariana, Rtoa Zafindravaka Valerie, fa tanjona ny hampiroboroboana ny fanatsarana ny kalitaon’ny vokatra fambolena biolojika eto Madagasikara. Tohanana ara-bola sy ara-teknika ny tantsaha malagasy miara-miasa amin’ny Symabio. Omena fiofanana koa izy ireo amin’ny lafiny fitantanana, ny fampifandraisana amin’ireo samy nahazo tohana, sy mitovy lalam-pihariana.
Manodidina ny 200.000 ny tantsaha hisitraka ny tohana avy amin’ny Fihariana. Misandrahaka amin’ny sehatry ny voly fanondrana, toy ny lavanila, ny jirofo, ny ilomenaka, ny jono (makamba, drakaka,…), sns.
Misehatra amin’ny fambolena ny 48,29% ny antontan-taratasy voarain’ny Fihariana, tamin’ny taona 2019. Azo antoka fa hanafaingana ny fampandrosoana isam-paritra ity fiaraha-miasa ity. Hampiroborobo sy hanitatra ny seha-pihariana, ny fanodinam-bokatra, ny indostria, ny famoronana asa manerana ny Nosy.